Esinye isixakaxaka ngemidlalo yeCAF: iMamelodi Sundowns nayo seyinqatsheliwe ukuya e-Algeria - Impempe
Esinye isixakaxaka ngemidlalo yeCAF: iMamelodi Sundowns nayo seyinqatsheliwe ukuya e-Algeria
Abaqeqeshi neMamelodi Sundowns oSteve Komphela, Rulani Mokwena noManqoba Mngqithi
Iphoqeleke ukulumisa ngemizuzu yokugcina seyipakishile uhambo lwayo iMamelodi Sundowns ebizolibhekisa e-Algeria la beyizodlala khona neCR Belouzidad emdlalweni wayo wesibili esigabeni samaqoqo kwiCAF Champions League ngoLwesibili oluzayo.
ISundowns beyihlele ukubamba kuleli ngoLwesine ntambama kodwa yathola incwadi eyazisa ukuthi ingabe isazohlupha njengoba umdlalo usumisiwe.
NeKaizer Chiefs izithole isenkingeni efanayo ngeviki elidlule umdlalo wayo emqhudelwaneni ofanayo uhlehliswa kulandela ukuthi usosesheni waseMorocco wenqabe ukuyinika izimvume zokungena kuleliya lizwe.
“Ukumiswa komdlalo kulandela isicelo sikasoshesheni wase-Algeria sokuba umdlalo uhlehliswe ngenxa yokuqiniswa kwakamuva kwezokuphepha nezempilo e-Algeria.
“IMamelodi Sundowns beyisiwenze wonke amalungiselelo yaze yathola nezimvume zokungena kuleliya lizwe ezithole emahhovisi enxusa lase-Algeria ngoLwesihlanu oludlule.
“Ngesikhathi kufika umlayezo wokuthi umdlalo sewumisiwe, iMamelodi Sundowns beyisilungela ukulibangisa esikhumulweni sesindiza i-OR Tambo la betizofike ithathe indiza ebheke eDoha okuyilapho beyizobe seyithola khona eya e-Algeria,” kusho isitatimende seSundowns ngoLwesine ntambama.
ISundonws iqhube yathi okuyiphoxe kakhulu ngalokhu wukuthi yaziswe seyize yalungisa yonke into yazimisela ngangohambo lwayo.
“Uhlaka olubhekelele imincintiswano kwiCAF luthe, ‘le ndaba izodluliselwa ekomidini elihlela imidlalo yamaqembu ukuze lithathe isinqumo esifanele nesizokwaziswa izinhlaka ezithintekayo ngesikhathi esifanele.’
“IMamelodi Sundowns iphoxekile ngesikhathi okufike ngaso lo mlayezo nangendlela okwenzeke ngayo konke. Iqembu lizoxhumana neCAF ngalolu daba kusasa (ngoLwesihlanu) ngo 12 emini,” kuphetha isitatimende.
Lesi sixakaxaka esenzeka ngemidlalo yeChampions League okukhona kuyo amaqembu akuleli asiphazamisi nje izinhlelo zeCAF kuphela kodwa nezePremier Soccer League njengoba imisa imidlalo yamaqembu kwiligi uma ezoyodlala ngaphandle.
Previous Previous post: Usola ukunganaki ngokudliwa kweKaizer Chiefs umakadebona onguWillard Katsande
Next Next post: Sekusolwa itulo lokulwa namaqembu akuleli ngenxa kaPatrice Motsepe nokhetho lweCAF